ithephu ephindwe kabini vs ukuphakamisa vs wave vs ilizwi: ukukhangela ezinye iindlela zokuvusa ifowuni
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Cofa kabini ngokuVusa ngokutsala vs Ilizwi: ukuphonononga ezinye iindlela zokuvusa ifowuni
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, abanye abavelisi bee-smartphone baqalise ukubeka iqhosha lokulinda / lamandla kunye neenzwa zeminwe kwiindawo ezahlukeneyo kwii-smartphones zale mihla. Ngamanye amaxesha, le ndlela ibekiweyo yenza ukuba kube nzima ukufikelela kumaqhosha ukuba ufuna ukukroba kwiscreen sakho sokujonga izaziso zakho okanye ujonge ixesha. Kwelinye icala, kuvela ingxaki entsha:uvusa njani ifowuni ngaphandle kokuchukumisa amaqhosha?
Yintoni ngoku umda okhawulelwe kwiimodeli ezimbalwa ze-smartphone ezinokuthi zivele zibe yingxaki yokwenyani njengoko abenzi be-smartphone besondela ngakumbi ekumiliseleni zonke iifowuni ezikwisikrini, iifowuni ezidibanisa amaqhosha asekhaya kunye neminwe yeminwe kwisiboniso ngokwaso. Njengoko kuvela, abavelisi bezixhobo sele beze nezisombululo ezininzi zokuvumela abasebenzisi ukuba bavuse iifowuni zabo ngaphandle kokucinezela naliphi na iqhosha (kunye nokwenza i-gymnastics yomnwe engaqhelekanga ukufezekisa le njongo).
Phakathi kwazo, ezona zithandwa kakhulu kukuCofa kabini ukuVusa, iCamera Wave, Phakamisa ukuvuka, kunye neMiyalelo yelizwi. Ngelixa amagama ezi zinto zinokwahluka phakathi kokuphunyezwa, umgaqo osisiseko sawo uhlala ungaguquguquki. Namhlanje, thina & apos; silapha ukuxoxa ukuba zithetha ntoni ezi mpawu, ukuba zifezekiswe njani, kwaye sizame ukufumanisa izibonelelo zezinto ezingeloncedo nganye nganye.
Ngaphambi kokuya phambili, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba, ukuba unegama eligqithisiweyo lesitshixo okanye ipateni yokutshixa, ezi zinto ziya kuyivusa ifowuni kwiscreen sokungena sokukhusela. Ukuba akukhange kubenjalo, uya kuthathwa uye ngqo kwiscreen sangaphambili, nokuba yeyiphi na into obukhe wayivula ngaphambi kokutshixa isixhobo okanye iscreen sasekhaya uqobo.
Ukuba u & apos; uyigungqise i-LG, i-Sony, okanye i-HTC yeflegi yefowuni, emva koko sele uyazi ukuba yintoni ekuthepha kabini ukuze uvuke kwaye isebenza njani. I-LG ibiza eli nqaku ngeKnock On, i-HTC iyayidibanisa nenkqubo yokuSungulwa kweMotion, ngelixa uSony enenqaku elidweliswe phantsi koNcedo lokuSebenzisa. Ngaphandle kwegama layo, nangona kunjalo, inqaku livumela abasebenzisi ukuba bavuse iifowuni zabo ngokuthepha kabini kwimboniso.
Ukufezekisa lo msebenzi, umnxeba wefowuni & apos; ujonge esweni igalelo lomsebenzisi. Xa iimpompo ezimbini zenzeka ngokulandelelana ngokukhawuleza kwindawo enye kwiscreen, inkqubo iyasivusa isixhobo.
Olona ncedo luphambili kweli nqaku xa kuthelekiswa nezinye iindlela kukusebenziseka okulula: ukubetha kabini isikrini ukuvusa ifowuni kubonakala kuyinto yendalo, ngakumbi ukuba & apos ungumsebenzisi weWindows osetyenziselwa ukucofa kabini.
Uninzi lwee-smartphones ezixhasa ukubetha kabini, unokucofa kabini isikrini sasekhaya ukuze ifowuni ingene kwimodi yokulala. Oku kuthetha ukuba unokuvula kwaye utshixe ifowuni yakho usebenzisa inkqubo. Okulusizi kukuba, ezinye ii-smartphones zinokuvuswa zisebenzisa impompo kabini.
Ilula kwaye inomdla njengoko le ndlela inokuba njalo, ukwenzeka ngengozi kunokwenzeka xa abasebenzisi begcina iifowuni zabo epokothweni. Oku kuhlala kwenzeka xa ukubonisa ubuntununtunu bokuthinta kuphezulu kakhulu, njengoko bekunjalo ngeSony Xperia Z5.
Ukuba iphasiwedi yokutshixa ipateni okanye ipateni isetiwe, umonakalo wona ubuncinci. Kwimeko yokungabikho kwenkqubo yokungena, nangona kunjalo, ifowuni yakho inokugqibela ithumele imiyalezo engafundekiyo kumphathi wakho okanye utsalele abazali bakho ngeyona ngxoxo imbi.
Phakamisa Ukuvuka-Umboniso oBonakalayo
Ngestokhwe se-Android Lollipop, uGoogle wazisa into entsha ebizwa ngokuba yiAmbient Display. Ngokomgaqo, i-gyroscope kunye ne-accelerometer ziyafumanisa ukuba uyithathile ifowuni kwaye uvuse ifowuni ukuze iveze izaziso zakho. Nge-iOS 10 entsha, iApple yazise into efanayo ebizwa ngokuba yiVusa.
Ezi nkqubo zinokuba namagama amahle, kodwa ukuphunyezwa kwazo kulula: abasebenzisi bafuna nje ukuphakamisa ifowuni ukuze bavuke. Ukusuka kwinto esiye sayifumana, eli nqaku lisebenza ngokuchanekileyo ngokuchanekileyo, njengoko mancinci amathuba okuqala ngengozi kuba abasebenzisi kunqabile ukuba baphakamise iifowuni zabo ngaphandle kokuzama ukuzenza.
Ngokubanzi, oku okwangoku yeyona ndlela ibalaseleyo yokuvusa ifowuni ngaphandle kokuchukumisa naliphi na iqhosha, nangona inqaku lingasebenzi xa ifowuni ilele phezu kwetafile. Ngaphaya koko, iAmbient Display inokuhlisa ubomi bebhetri bokuma kweefowuni ze-Android ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-20, okuninzi kakhulu.
I-Wave To Wake yenye indlela efanelekileyo yokuvusa ifowuni ngaphandle kokuyichola. Ngapha koko, ngale ndlela, abasebenzisi akufuneki bachukumise ii-smartphones zabo. Endaweni yoko, abasebenzisi bafuna kuphela ukuhambisa inzwa yokusondela, ehlala ibekwe ngaphezulu komboniso kufutshane nekhamera ejonge ngaphambili.
Kukho amaxesha apho izandla zakho zingcolileyo ukuba zingabanjwa kwifowuni yakho kodwa kusafuneka uvuse isixhobo (ukukhangela ixesha, umzekelo), kulapho ke le ndlela yokuvuka ingqina ukusetyenziswa kwayo.
Isamsung yazise kuqala eli nqaku kwi-Galaxy S5, kodwa izixhobo ezinje ngeGlass Qaphela 4, uthotho lweGPS S6, iGlass Qaphela 5, kunye noluhlu lweGPS S7 bayifumene okwangoku. Nokuba ibizwa ngokuba yi-Air Wake Up okanye i-Gesture Wake, inqaku lalinokusebenza okufanayo kuzo zonke izixhobo ze-Samsung.
Ngamagama obuchwephesha ngakumbi, isoftware ihlala ibeka iliso idatha evela kwisenzi esikufutshane, kwaye iya kuvusa ifowuni xa ibona ukuba isandla sakho sisondele esikrinini. Ngapha koko, ezona nkqubo zilungileyo zikwatsala idatha kwi-gyroscope, okuthetha ukuba ngekhe basebenzise isixhobo ukuba asihlali asibekwanga kumphezulu othe tyaba.
Kulungile Google / Imiyalelo yelizwi
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, kuya kufuneka sichaze ukuba ezinye izixhobo zinokuvuswa ngelizwi. Ewe, thina & apos; sithetha ngomyalelo odumileyo weLizwi likaGoogle. Kwiifowuni ezininzi ze-Android, unokucela ukukhangela kwelizwi likaGoogle ngoku kuso nasiphi na isikrini ngokulandela inkqubo yokumisela ehambelanayo. Kwinani elilinganiselweyo lezixhobo, umthetho olungile weGoogle uyasebenza xa isikrini sicinyiwe.
Eli nqaku laziswa okokuqala nge-Moto Moto X yoqobo, kodwa sele yenziwe yafumaneka kwizixhobo ezinjengeNexus 9, iNexus 5, kunye neNqaku leSamsung leSamsung 4. Ngelishwa, akukho sixhobo senzala yangoku sixhasa ukwenziwa kwelizwi xa isikrini icimile.
Ingxaki enkulu ngokuvuka okwenziwe lilizwi kukucoca ibhetri. Ukuze ukwazi ukutolika imiyalelo yakho xa isikrini sicinyiwe, isixhobo kufuneka sihlale sijonga igalelo kwimakrofoni yaso. Oku kufuna izixhobo ezingaphezulu ngokuthelekiswa neempompo ezibini kunye namaza ekhamera.
Kwi-Moto X yoqobo, i-Motorola ifakelwe isiko le-SoC ebandakanya chip eyahlukileyo eyilelwe ukubeka esweni kunye nenkqubo yokufaka imakrofoni ngaphandle kokuvusa iprosesa ephambili. Ngelishwa, nangona kunjalo, oovimba abangena kule nzame abaqinisekiswanga ziziphumo.
Ngoku ngoku sishwankathele ngokufutshane ezinye iindlela zokuvusa i-smartphone, sijikela kuni, bafundi bethu, ukunika ingxelo.
Yeyiphi indlela oyithandayo yokuvusa ifowuni ngaphandle kokuchukumisa iqhosha lomzimba? Veza uluvo lwakho ngokuvota kwi-poll engezantsi, kodwa qiniseka ukuba usishiyele izimvo ukuba iingcinga zakho azinakho ukuvakaliswa ngokupheleleyo ngempendulo enye yokhetho.
Cofa kabini ngokuVusa ngokuTshangatshangisa vs Ilizwi: Yeyiphi eyona Ntandokazi yakho?
Cofa kabini Amaza Ukuboniswa kwe-Ambient / Ukuphakamisa ukuVuka Kulungile Google / Imiyalelo yelizwiIziphumo zeVoti yokujongaCofa kabini 63.6% Amaza 8.9% Ukuboniswa kwe-Ambient / Ukuphakamisa ukuVuka 23.05% Kulungile Google / Imiyalelo yelizwi 4.45% Iivoti 1349
iklabhu yesam emnyama ngolwesihlanu iphone
iifowuni ezintsha 2016 kwi & t
Alleged Galaxy S9 components smile for camera: there & apos; s indawo ye-headphone jack
Iifowuni ezinkulu ezi-6 ezineebhetri ezisuswayo
Ungayitshintsha njani indlela yokubuyisela kwimeko yesiqhelo (njenge-CWM okanye i-TWRP) kwi-Android
Ukuphononongwa kwe-LG TONE
I-AT & T, abathengi beCricket bafumana isicatshulwa esithi bavumile ukunika idatha kubantu besithathu
I-OpenSignal: IVerizon vs AT&T vs T-Mobile vs isantya se-LTE kunye nokuthembeka kwengxelo ye-Q4 iphumile
I-Samsung Galaxy S20 Ultra 5G vs Qaphela i-10 +: ubungakanani, ubungakanani kunye nokuthelekisa uyilo
Ixabiso le-LG G3 kunye nomhla wokukhutshwa